The Flash – Categories – Channel Myanmar
The Flash Season3Flash Season3တငျထားပေးပါတယျ။စီစနျ ၂ အဆုံးမှာ ဘယျရီအယျလနျဟာ အခြိနျနောကျဆုတျပွေးပွီးသူ့အမကေို ကယျတငျတာနဲ့ အဆုံးသတျသှားခဲ့ပါတယျ။နှောကျယှကျလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ Timeline ကို အကွီးကယျြဆုံး နှောကျယှကျမိတဲ့အခါ ဘာတှေ ဖွဈလာမလဲ...သူ့ရဲ့စှမျးအားတှေ?...လူတှရေဲ့ ဘဝတှေ ပွောငျးလဲမှုတှေ....?အားလုံးကတော့ Flashpoint Paradox ကို မြှျောလငျ့နပေမေယျ့စီးရီးထဲမှာတော့ အကွီးအကယျြ ဖွဈလာမလားဆိုတာ မသခြောသေးပါဘူး....ဖလကျရျှစီးရီးထုံးစံအတိုငျး မွှပျကှကျတှေ အပွောငျးအလဲတှေ မြားစှာကို ခံစားရဦးမှာတေ့ာ သခြောနပေါတယျ....Complete Zip File VIP / Yoteshin[1-12] / Yoteshin[13-23]
The Flash Season2(မြန်မာစာတန်းထိုး) အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ The Flash Season2EP 1 ကို Channel Myanmar နှင့်MM Subtitle တို့ ပူးပေါင်း တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီပထမတွဲတုန်းက ဘယ်ရီ အယ်လန် တစ်ယောက် မြို့တော်ကို ကယ်တင်နေစဉ်ပြီးသွားပါတယ် ဒီအပိုင်းမှာ မြို့တော်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သလို သူတို့ သူငယ်ချင်းFire Storm ထဲက တစ်ဦးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်ပါတယ်...၆ လ လောက် အဲ့ဒီစိတ်တွေ နဲ့ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ဘယ်ရီအယ်လန် တစ်ဖြစ်လဲ အလင်းတန်း ဟာစိတ်တွေ မတည်ငြိမ်နိုင်သေးပါဘူး Star Lab ဓါတ်ခွဲခန်း မှာ ဒေါက် ဟယ်ရီဆင်ဝဲလ်မရှိတော့တဲ့ နောက် ဘယ်သူမှ မလာတော့ပဲ သုသန်ပြင်ကဲ့သို့ တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်ဘယ်ရီ အဲလန် လဲ မီတာလူသားတွေကို လိုက် နှိမ်နင်းစရာ မရှိတော့တဲ့ နောက်သူ့ရဲ့ စုံထောက် အလုပ်ကိုသာ ဆက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်...ပြသနာကတော့ ...
The Flash Season2(မြန်မာစာတန်းထိုး)
Flash Season 1 (2014) TV Series နှစ်ခြိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ လက်မလွတ်တမ်းကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုကိုစတင် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ...Arrow ဇာတ်လမ်းတွဲကို ရေးသား တဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေးတဲ့သူပဲ ဒီဇာတ်လမ်းကိုဆက်ရေးထားတာပါ..တခြားပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက အောင်မြင် နေပါပြီ..ကြည့်ရှုသူတွေလည်းများပါတယ်..ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုနည်းနည်းလောက်မိတ်ဆက်ပေးရအောင် အသက် ၁၁ အရွယ်ဖြစ်တဲ့ ဘယ်ရီအဲလန် တစ်ယောက် ညတစ်ည သန်းခေါင်ယံမှာ အသံတစ်သံ ကြောင့်လန့်နိုးလာပါတယ်..အပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အလင်းတန်းတွေကြားမှာ ပိတ်မိနေတဲ့သူ့အမေကို တွေ့ရှိရပြီး..အလင်းတန်းတွေကြားမှာ လူပုံစံတွေ့ရှိနေရပါတယ် အဲ့နေရာကနေ ရုတ်တရက် ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိပဲ လမ်းမကြီးပေါ်ကို သူရောက်ရှိသွားပါတယ် အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ သူ့အမေ သေဆုံးနေပြီးတော့ သူ့အဖေကိုရဲတွေဖမ်းခေါ်သွားကြပါပြီ ဒီလိုနဲ့ သူ့ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းမလေးရဲ့ အဖေက သူ့ကိုခေါ်ယူမွေးစားခဲ့ပါတယ် မူခင်းသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာလက်ထောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှတော့ ဘယ်ရီက အခဲမကျေစွာ သူ့အမေကိုသတ်သွားခဲ့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတခုကိုစုံစမ်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်..အဲ့မှာ မတော်မဆမှု တစ်ခုကြောင့် သူကိုယ်တိုင် မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့.............Complete Zip File VIP / Yoteshin[1-12] / Yoteshin[13-23] Season 1 Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12 Episode 13 Episode ...
Flash Season 1 (2014)